Ciidamo dilay shacab Soomaali - BBC News Somali
Ciidamo dilay shacab Soomaali
Wararka ayaa sheegaya in Afar iyo toban qof oo rayid ah ay ku dhinteen hawlgal ciidamada Itoobiya ka sameeyeen tuulada Wardiile oo ku dhaw deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay.
Dilka dadkan rayidka ah ayaa dhacay shalay galinkii danbe.
Dadka la dilay waxa kamid ahaa culimo iyo odayaal.
Weriyaha BBC Ibraahim Maxamad Aadan ayaa taleefanka Wardiile kula hadlay Cabdiqaadit Cali Xasan, oo horey gudoomiye ku xigeen uga soo noqday deegaanka Awdiinle isla markaana aabihiis lagu dilay hawlgalkaasi.
Weriyuhu wuxuu marka hore weydiiyay sida wax uga dhaceen Wardiile.
War AMISOM ay ku qortay barteeda twitter-ka ayay ku sheegtay, in ay soo gaareen wararka ku saabsan in dad rayid ah ay ku dhinteen intii uu socday dagaal ka dhacay tuulada Wardiile ee gobolka Bay oo u dhaxeeyay AMISOM iyo Al-Sahbaab sida ay ku doodayso AMISOM.
AMISOM waxaa kaloo ay ku sheegtay warka kooban ee ay soo dhigtay barteeda twitter-ka in ay si dhaba u qaadanayso wararkaas, isla markaana ay bilaabayso baaritaan, wixii ka soo baxana la soo bandhigi doono iyadoo lala kaashanayo dawladda Soomaaliya.
Maqal Maxaa cusub oo lagu soo bandhigay Bandhiga Isgaarsiinta iyo Teknolojiyada Soomaaliya
Maxaa cusub oo lagu soo bandhigay Bandhiga Isgaarsiinta iyo Teknolojiyada Soomaaliya
Maqal Dood ku saabsan in ardayda Soomaalida ay aqoontoodu uga faaideeyaan dalkooda iyo inkale
Dood ku saabsan in ardayda Soomaalida ay aqoontoodu uga faaideeyaan dalkooda iyo inkale
Maqal Ganacsade Cabdiraxmaan Kaahin oo Mareykanka abaalmarin lagu gudoonsiiyay
Ganacsade Cabdiraxmaan Kaahin oo Mareykanka abaalmarin lagu gudoonsiiyay
Maqal Soomaaliya oo sharaxaad ka bixisay taageeradeeda Sucuudi Carabiya
Soomaaliya oo sharaxaad ka bixisay taageeradeeda Sucuudi Carabiya
Maqal Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo IMF kala qeybgalaya shirka Indonesia
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo IMF kala qeybgalaya shirka Indonesia